Ungqamanisa njani iiAkhawunti zebhanki kwi-QuickBooks
Ngu-Stephen L. Nelson
Ungayidibanisa iakhawunti yebhanki ngesantya esimangalisayo kwii-QuickBooks. Ukuba uyafuna, ungaprinta ingxelo encinci eshwankathela uxolelwaniso lwakho emva kokucofa uQhagamshela ngoku iqhosha. (I-QuickBooks ikunika olu khetho kwibhokisi yencoko yababini ebonisayo.)
Ungacofa iqhosha leNgxelo zangaphambili ukubonisa ibhokisi yencoko ekuvumela ukuba uprinte ezinye iingxelo zoxolelwaniso ezindala. Unokucofa iqhosha leNgxelo yokuNgafani ukuze uvelise ingxelo edwelisa imicimbi ehleliweyo okoko wagqibela ukulungisa iakhawunti.
Ungacofa izihloko zekholamu ezisetyenzisiweyo kwiXolelwaniso lwefestile ukuhlela nokucwangcisa ulwazi lweakhawunti yebhanki.
Ukuqala ukudibanisa iakhawunti yakho, landela la manyathelo:
1Khetha iBhanki → Ungqamanisa umyalelo.
I-QuickBooks ibonisa ibhokisi yencoko yababini yoQhagamshelo. Khetha iakhawunti ofuna ukuyidibanisa kuluhlu lokuhlahla lweAkhawunti.
MbiniSebenzisa ibhokisi yomhla wenkcazo ukuchonga umhla wokuphela kwengxelo yebhanki oyisebenzisayo kuxolelwaniso.
Njengokuba kuhlala kunjalo kwimihla yomhla kwi-QuickBooks, ufaka umhla ngefomathi yomhla we-mm / dd / yyyy, okanye ucofe iqhosha lekhalenda kwaye ulisebenzise ukukhetha umhla ochanekileyo.
prilosec nini ukuthatha
Faka ibhalansi yokuphela eboniswe kwisitatimende seakhawunti yakho yasebhokisini kwibhokisi ye-Balance Ending.
3Sebenzisa iNtlawulo yeNkonzo kunye neebhokisi ezifumene inzala ukuchonga inani layo nayiphi na intlawulo yenkonzo okanye nayiphi na inzala, umhla wayo nayiphi na intengiselwano, kunye neakhawunti oyisebenzisayo ukulandelela ezo ntlawulo.
Umzekelo, ukuba ingxelo yakho yebhanki ibonisa intlawulo yenkonzo, faka imali yenkonzo kwibhokisi yokuqala yeNtlawulo yeNkonzo. Ngenisa umhla wentengiselwano yenkonzo kwibhokisi yoMhla weNtlawulo yeNkonzo. Okokugqibela, khetha iakhawunti yeendleko ezifanelekileyo yokulandela umkhondo weenkonzo ezivela kuluhlu lokuhlawula ezantsi kwiAkhawunti. (Iintlawulo zebhanki, umzekelo, yiakhawunti elungileyo yokulandela umkhondo wentlawulo yenkonzo.)
Ngendlela efanayo, sebenzisa iibhokisi ezifumene iNzala ukuchaza nayiphi na inzala efunyenwe kwiakhawunti yeshishini.
4Ukuphonononga ingxelo yengxelo.
Emva kokufaka ulwazi malunga neakhawunti yebhanki, umhla wesitetimenti, imali eseleyo, kunye nayo nayiphi na intlawulo yenkonzo okanye inzala oyifumeneyo, thatha ithutyana ukuphonononga ulwazi kwaye uqinisekise ukuba ichanekile. Uya kuba nomnenga wexesha oxolelanisa iakhawunti ukuba imali ozama ukuyidibanisa ayichanekanga.
5Emva kokuba uqinisekise ukuba yonke into i-hunky-dory, cofa iqhosha lokuqhubeka.
Iincwadi ezikhawulezayo zibonisa iiFestile zokudibanisa kwakhona.
6Ukuchonga iitshekhi kunye neentlawulo zentengiselwano ezisuse iakhawunti yakho yebhanki, cofa ukuthengiselana okususileyo.
Iwindow yokuDibanisa ibonisa uluhlu lweentengiselwano ezimbini: uluhlu lweetsheki kunye neentlawulo, ezibonakala ngasekhohlo, kunye noluhlu lweedipozithi kunye nezinye iikhredithi, ezibonakala ngasekunene. Xa ucofa itransekshini, ii-QuickBooks ziphawula intengiselwano ngenqaku lokutshekisha, elibonisa ukuba intengiselwano icacile.
Unokumakisha yonke intengiselwano kuluhlu njengoko icociwe ngokunqakraza kwiqhosha le-All All. Ukuphawula konke ukuthengiselana kuluhlu olungacaciswanga, cofa kwindawo ethi Unmark All.
i-boric acid yeziphumo ebezingalindelekanga ze-bv
Sebenzisa Iidiphozithi kunye nolunye uluhlu lweeCredits ukuchonga ezo ntengiselwano ze-akhawunti ezisuse iakhawunti yebhanki. Uchonga intengiselwano ecociweyo ngendlela efanayo echonga itsheki ecociweyo okanye intengiselwano yentlawulo. Unokucofa itransekshini, ebangela ukuba ii-QuickBooks ziphawule intengiselwano njengoko icinyiwe.
Unokusebenzisa uphawu lweMark All kwaye ususe ukumakisha onke amaqhosha ukumakisha okanye ukumakisha zonke iidiphozithi kunye nokunye ukuthengiselana ngetyala ngexesha elinye.
Ukuba uyaqonda ukuba njengenxalenye yoxolelwaniso, ungene ngokungachanekanga kwintlawulo yenkonzo, inzala oyifumeneyo, ibhalansi yokuphela, okanye nayiphi na enye ingcaciso, cofa indawo ethi Guqula kancinane. Iincwadi ezikhawulezileyo ziphinda zibonise ibhokisi yencoko yababini yoQhagamshelo. Yenza utshintsho oluyimfuneko, kwaye ucofe uQhubeka ukuze ubuyele kwiNgqokelela yewindows.
7Qinisekisa ukuba ibhalansi ecinyiweyo ilingana nebhalansi yokuphela.
Ukuba ubonelele ngolwazi oluchanekileyo kwibhokisi yencoko yababini yoQhagamshelo, kwaye uchonge ngokuchanekileyo yonke intengiselwano ecacise iakhawunti yakho, ibhalansi yokuphela kufuneka ilingane nebhalansi esuswe.
8Xa ibhalansi yokuphela ilingana nebhalansi ecinyiweyo, cofa iQhagamshela ngoku iqhosha.
I-QuickBooks irekhoda ngokusisigxina ukuthengiselana okucociweyo njengoko kucociwe kwaye kuphinda kuboniswe iwindow yeRejista. Ukuba awukwazi ukudibanisa iakhawunti, unokucofa iqhosha lokushiya. I-QuickBooks igcina uxolelwaniso olugqityiwe ngesiqingatha sakho ukuze ubuye kamva uze ulugqibe.
ipilisi ene k 18
yenza idilesi ye-imeyile entsha
uguquko kwi-epsom yetyuwa
ingxowa yebhalsam yenja
iziphumo ebezingalindelekanga phentermine 37.5mg